Ka abuur midabada midabada leh sawir ku yaal ColorFavs | Abuurista khadka tooska ah
ColorFavs waa aalad websaydh cusub oo loogu talagalay sameynta gogol midabyo ah sawirrada
Waxaan caadi ahaan na soo hel qalab web cusub taasi aad ayey ugufiican tahay raadso ilo shaqo gaar ah kulleejada sida fontfling, ama Qaababka kala badh si loo abuuro qaababkaas oo mararka qaar ka dhib badan sida ay dhab ahaan yihiin.
Maanta waxaan kugu soo dhaweyn karnaa mid cusub oo loo yaqaan 'ColorFavs' oo ah aalad daryeesha curiyaan midabbo qurux badan ee sawirrada, URL-yada ama gelitaannada aan kala sooca lahayn ee aan bilaabayno.
Qalabkan websaydhka waxaa sameeyay Deron Sizemore, oo ah naqshadeeye websaydh kaas oo wakhtigiisa firaaqada ku talo galay inuu awood u yeesho furitaanka degelkan si qofkasta wuu abuuri karaa midabbo qurux badan oo midab leh, oo la mid ah kuwa la bilaabay markii qofku ku soo rogo shaqo abuur hal abuurka bogga Dribbble.
ColorFavs waxay si fudud u abuuri kartaa palette midab leh jiididda iyo daadinta sawir, geli URL ama xulo taxanaha qiimaha gabi ahaanba si aan kala sooc lahayn. Waxa kale oo aad jeclaan kartaa jaantusyada midabka aad jeceshahay, aragto midabbo is-dhammaystiraya, oo aad abuuri karto ururintaada. Qalab si fiican u shaqeeya, waa mid dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo.
Degelkan waxaa lagu abuuray qaab Django leh Luqadda barnaamijka Python. Waa in la ogaadaa in xubnaha isdiiwaangeliyey ay marin u heli karaan xulashooyin taxane ah sida kuwa ay awoodaan inay jeclaadaan waraaqaha iyo sidoo kale inay abuuraan uruurin u gaar ah.
Bogga faahfaahinta midabka shaqsiga laftiisa, waad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo faahfaahsan intaad kala dooran karto afarta beddelaad midab: RGB, HSL, CMYK iyo Websafe. Ikhtiyaar kale ayaa ah 10 wejiga fudud iyo mugdiga oo ku saleysan midabka asalka ah.
Waxaad haysaa webka tan iyo xidhiidhkan y waqti badan ha ku qaadin inaad iyada u joogsato si loo hubiyo shaqada fiican ee naqshadeeyehan oo leh aalad web heer sare ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » ColorFavs waa aalad websaydh cusub oo loogu talagalay sameynta gogol midabyo ah sawirrada
'Heerka UP' ee DeadSlug iyo tababaraha ugu dambeeya ka hor laba "noobs" yar